I-china i-JKY80 / 70-4.0 abakhiqizi be-Vacuum Extruder nabaphakeli | I-Bricmaker
Lo mshini wemishini ye-vacuum extruder usetshenziselwa ikakhulukazi izitini noma ukuvimba i-extrusion. Futhi kuyisizukulwane esisha semishini esindayo futhi ngokukhethekile ngezinto zokusetshenziswa zemfucuza yokwakha, impango, ubumba, inhlabathi, udaka, i-shale, amalahle, umlotha, igenge nokunye.
Ngo-2020, sangenisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe base-US, buhlanganiswe nemishini yethu yokukhiqiza yesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-30, i-R & D JKY80 / 70-4.0 Hard-Plastic Double-Stage Vacuum Extruder eyi-Hard-Plastic, eyaqhubeka ngaphambi kwemikhiqizo eyimakethe.
Le modeli ye-vacuum extruder reamer ethola ukuphela ububanzi ingama-800mm, futhi isiphetho sokugcina se-extrusion auger ubukhulu singama-700. Ngaphansi kwalesi silinganiso esihle sokucindezelwa kwe-extrusion, esifaneleke kakhulu ekwenzeni iphaneli lodonga lokuvikela okushisayo, uqhekeko lwethayela nezitini, isigaba esikhulu sesiphambano esingenalutho sokuvimba ukushisa nge ephakeme isilinganiso eziyize.
a) Extruder Auger: i-welded nge-electrode engavumi ukugqoka, le auger ingahle isebenze futhi; ukufafaza izinto zokwakha ezingamelana nensimbi (ubulukhuni izikhathi eziyi-7 kokujwayelekile), okuqinisekisa impilo yensizakalo ende.
b) Ukuxuba i-reamer: izinto eziphakeme zokuphonsa i-chromium ezinesici esiphakeme sokumelana nokugqoka, inesikhathi eside sempilo yokukhiqiza izitini noma amabhlogo ayizigidi ezingama-30 +.
c) Isinciphisi segiya: izinto zokwakha zensimbi zensimbi ezisezingeni eliphakeme ezenziwa nge-carburizing, ukucima, inqubo yokugaya, ukunemba kwebanga le-6, ubunzima bayo bufinyelela ku-HRC54 ~ 62 ngesici sokulayisha okuphezulu namandla okuphila isikhathi eside.
d) Master kushaft: yamukele okwenziwe ngamaShayina kwekhwalithi ephezulu ye-shaft ye-40Cr noma ikhodi yokumaketha engu-45, zonke izinto ezinokuphathwa kokushisa kwekhwalithi, ezinenzuzo yokumelana nokugqoka okuhle, i-torque yokudlulisa enamandla namandla esikhathi eside.
e) Ukunikeza: wonke amabombo wemishini athola uphawu oludumile lwamazwe omhlaba iTimken Bearing kanye nomkhiqizo odumile waseChina ophethe uHawaluo njll.
Umkhiqizo Wokugcina Hollow ezishisayo ukwahlukanisa amabhlogo / iphaneli
I-10000 × 7400 × 2700
Olandelayo: I-JKY75 / 65EIII IV-4.0 I-Vacuum Extruder